သစ္စာအလင်း: ပိဋကတ် သုံးပုံ နှင့် သံဃာ့ဂုဏ်
အခုပြော ပြချင်တာ က ပိဋကတ် သုံးပုံ ကို မြန်မာပြန်များကို PDF File ကို ပြောင်းထားလိုက်ပြီး တင်ထားတာ ပါ..။မြန်မာ ပြည် မှ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ် ဦး က လေ့လာ လိုကြောင်း၊ရယူလိုကြောင်း တဆင့် ကြား သိရတဲ့ အတွက် လျင် လျင် မြန် မြန် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်လိုက်ရပါတယ်..။
မေမေတို့ လူ ပုဂ္ဂိုလ် တွေက ကျေးဇူးတော် ရှင် မြတ် စွာ ဘုရား ရဲ့တရားတော် တွေကို သံဃာ တော် တွေ မှ တဆင့် ထိတွေ့ ကြားနာ ခွင့် တွေရရှိရပါတယ်..။
သံဃာ တော် တွေ ဟာ သူတို့ ရဲ့ ဘ၀ မှာ၊ပဋိပတ္တိအားထုတ်ခြင်း။ပရိယတ္တိစာပေသင်ယူခြင်း၊ သင်ကြားခြင်းတွေနဲ့အတွက် ဘဝ တစ်ခုလုံး မြှုပ် နှံပေးဆပ်ကြ့ ပါတယ်..။ နောက်ပြီး ထေရ် အစဉ် အဆက် ထိန်းသိမ်းခဲ့လို့သာ ထေရ ဝါဒ ဗုဒ္ဓ သာ သနာ တော် ကို ဘုရားဟော မူရင်းအတိုင်းမေမေတို့ ကြားနာ ခွင့် ရကြတာ ဖြစ်တယ်။ သည် လို နှလုံးသွင်းပြီး (သံဃာ)ကို ကြည်ညိုတတ်ပါစေ၊ ရိုသေတတ်ပါစေ၊ တန်ဘိုးလည်းထားတတ်ပါစေ ကလေးတို့ ရေ။
မေမေ တို့ Buddhist Great Council လို့ ခေါ်တဲ့ သင်္ဂါ ယနာ တင် ခြင်းကို နှစ်ကြိမ်တိုင် တိုင် မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ပြုလုပ် ခွင့်ရခဲ့ တာဟာ မြန်မာ ပြည်မှ သံဃာတော် တွေရဲ့ သီလဂုဏ်၊ သမာ ဓိဂုဏ်၊ ပညာ ဂုဏ် တွေ ကြောင့် ပါကလေးတို့ ရေ..။ဘာ ဖြစ်လို့လဲ ဆို တော့ ဆဋ္ဌမ အကြိမ် သင်္ဂါ ယနာ တင် ပွဲကို ထိုင်းဘုရင် က သူတို့ နိုင် ငံ မှာ လုပ် သင့်ကြောင်း လုပ် လို ကြောင်း ဆွဲ ယူ ခဲ့ပါတယ်..။
မအောင်မြင် ခဲ့ပါ ကလေးတို့ ရေ.. ဘာ ဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ထိုင်းနိုင် ငံ မှာ ပိဋကတ် သုံးပုံ ကို စာ မျက် နှာ ဘယ် လောက်မှာ ဘာ ရှိတယ်၊ ကြောင်းရေ ဘယ် လောက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သာ မက ပါဋ္ဌိ၊ အနက်၊ အနက်ရင်း တို့ကို အတိ အကျ စာ အုပ် မကြည့် ပဲ ပြန် ဆို နိုင် တဲ့ ၊ Guinness World Records မှာ ဉာဏ် ရည် ကို မှတ် တမ်း အတင် ခံ နိုင်စွမ်း ရှိ တဲ့
(ကျေးဇူးတော် ရှင် အရှင် ဝိစိတ္တသာ ရာဘိဝံသ) လို သံဃာ ရတနာ သည် ထိုင်းနိုင် ငံ မှာ ရှိ မနေလို့ပါပဲ ကလေးရေ..။
ထိုင်း နိုင် ငံ မှာ ထိုင်းဘာ သာ နဲ့ ပိဋကတ် သုံးပုံ ကို ပူဇော် လို တဲ့ အခါ မြန်မာ ပြည် ၊ မဟာစည် ရိပ်သာ မှ မြန်မာ ဆရာတော် ကို တောင်းပန် လျှေက်ထားခဲ့ကြပါတယ်..။ ထိုင်းမှာ အနှစ် ၄၀ ကျော် နေထိုင်ပြီး သာ သနာပြုပေးခဲ့ တဲ့ ကျေးဇူးတော် ရှုင်ဆရာတော် အရှင် အာ သဘ ဖြစ်ပါတယ်။
မေမေ ထိုင်း မှာ နေတုံးက ကျေးဇူးတော် ရှင် ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ ဆရာတော် ဘုရားကြီးနဲ့ အတူ လိုက်ပါ ပြီး ဖူးမျှော် ခဲ့ရဘူးတယ်..။ အော် မီးမီး နဲ့ မေမေ့ မမကြီး ပါ ပါတာ ပဲ မှတ်မိတယ်မဟုတ်လားသားသားတော့ မပါဘူးနော်။ မြ ဘူရားနား က ကျောင်းတိုက် မှာ ထိုင်းဘုရင် ကိုယ် တိုင် ဆေးဝါးကုသပေးထား တာ အဲ ဒီတုံးက သက် တော် ၉၀ ကျော် နေခဲ့ပါပြီ..။
နောက် တစ်ခုကတော့ မေမေ က ထိုင်းမှာ တုံးက တစ် ခါ အီတလီ မှာ တစ် ခါ ဆရာ ကြီး ဦး ဂိုအင်ကာ ဖွင့် လှစ်တည် ထောင် ထားတဲ့ ဓမ္မကမ္မလ ရယ်၊ ဓမ္မအတ္တလ ရယ် မှာ တရား နှစ် ကြိမ်ဝင် ခဲ့ဘူးပါတယ်..။မှတ်မှတ်ရရ.. ၉ရက် မြောက် ည နာယူရ တဲ့ ဆရာ ကြီးရဲ့ Discourse မှာ
(Myanmar is only one country which maintained the original techniques of Buddhism.
I was fortunately born in Myanmar.)
လို့ ပောာတာကို ကြားလိုက်ရ ချိန် မှာ မြန်မာ အဖြစ်မွေးဖွား ခဲ့ ခြင်း ဟာ တို့ များ ရဲ့ ကံကောင်းခြင်းလက် ဆောင်တွေပါ လားလို့ကြက်သီး မွှေးညှင်းထ ကြည် နူး ဝမ်းမြောက် ခဲ့ ရပါတယ်..။တန် ဘိုး လည်း ထားတတ် ခဲ့ပါတယ် ကလေးရေ..။
အဲ ဒီလို ခံယူ ချက် ကလေး တွေ ရှိသွားရင် မေမေတို့ လည်း ပိဋကတ် တော် တွေကို ပူဇော်ချင် စိတ် တွေ ပေါ်လာ မှာ ပဲ နော်..။ မြန်မာ လို ဖတ်ခွင့် ပူဇော်ခွင့် ရတာ ဘုန်းကံကြီးမားလွန်းလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်.လို့ မှတ်ယူထားပါကလေးတို့ရေ။
အခု မျှ ဝေထားတဲ့ File စာရင်းကို ဖေါ်ပြထားပါတယ်။http://www.dhammadownload.comမှာ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင် အရှင်အာစာရထေရ၀ါဒတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် က မျှဝေထားတာရယ် Alpha Computer မှဒေါက်တာ ဇော်ရဲသူ ဓမ္မ ဒါန ပြုထား တဲ့ File များကို PDF File အဖြစ်ပြောင်းပြီး upload ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။တန်ဘိုးထား ပူ ဇော်ကြရင် အလွန် ဝမ်းမြောက်ရမှာ ပါ..။
၀ိနည်းပိဋက - ပါရာဇိကဏ် ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
်ဝိနည်းပိဋက - ပါစိတ် ပါဠိတော် - ဘိက္ခုပါစိတ်
၀ိနည်းပိဋက - ပါစိတ် ပါဠိတော် - ဘိက္ခုနီဝိဘင်း
၀ိနည်းပိဋက - မဟာဝဂ် ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
၀ိနည်းပိဋက - စူဠ၀ဂ် ပါဠိတော် မြန်မာပြန
်ဝိနည်းပိဋက - ပရိဝါ ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
(သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် မြန်မာပြန်)
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ဒီဃနိကာယ် သီလက္ခန်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ဒီဃနိကာယ် မဟာဝဂ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ဒီဃနိကာယ် ပါထိက၀ဂ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - မဇ္ဈိမနိကာယ် မူလပဏ္ဏာသပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - မဇ္ဈိမနိကာယ် မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - မဇ္ဈိမနိကာယ် ဥပရိပဏ္ဏာသပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - သံယုတ္တနိကာယ် သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - သံယုတ္တနိကာယ် နိဒါန၀ဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - သံယုတ္တနိကာယ် ခန္ဓ၀ဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - သံယုတ္တနိကာယ် သဠာယတန၀ဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - သံယုတ္တနိကာယ် မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အဂုင်္တ္တရနိကာယ် အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် ဧကကနိပါတ်
်သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အဂုင်္တ္တရနိကာယ် အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် ဒုကနိပါတ်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အဂုင်္တ္တရနိကာယ် အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် တိကနိပါတ်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် စတုက္ကနိပါတ်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အဂုင်္တ္တရနိကာယ် အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် ပဉ္စကနိပါတ်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အဂုင်္တ္တရနိကာယ် အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် ဆက္ကနိပါတ်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အဂုင်္တ္တရနိကာယ် အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် သတ္တကနိပါတ်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် အဋ္ဌကနိပါတ်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အဂုင်္တ္တရနိကာယ် အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် န၀ကနိပါတ်
်သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် ဒသကနိပါတ်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် ဧကာဒသကနိပါတ်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် ခုဒ္ဒကပါဌပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဓမ္မပဒပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဥဒါန်းပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဣတိဝုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် သုတ္တနိပါတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် ၀ိမာန၀တ္ထုပါဠိတော် မြန်မာပြန်
်သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် ပေတ၀တ္ထုပါဠိတော် မြန်မာပြန်
်သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် ထေရာပဒါန်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် ထေရီအပဒါန်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဗုဒ္ဓ၀ံသပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် စရိယာပိဋကပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် မိလိန္ဒပဥှာပါဠိတော် မြန်မာပြန်
အဘိဓမ္မပိဋက - ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် မြန်မာပြန်
်အဘိဓမ္မပိဋက - ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန်
အဘိဓမ္မပိဋက - ပုဂ္ဂလပညတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
အဘိဓမ္မပိဋက - ကထာဝတ္ထုပါဠိတော် မြန်မာပြန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:30 AM